Unbreakable - Shinya - Wattpad
345K Reads 32.9K Votes 45 Part Story
By Manato-Shinya Ongoing - Updated May 16
This isacruse anymore but.....our love is unbreakable!
The sequel of Love Legend!
This story is my own story please enjoy~^ ^
Peach47 Apr 12
Shinya ကို လွမ်းလို့ cmt လေးတွေ reply ပြန်ပါဦးးလို့ ❤❤
invisible_clover Apr 29, 2016
အိုမို...ပြန်​တင်​​ပေးတယ်​ ​ကျေးဇူးပါ ​အော်​တာနင်းT_T ဒါ​လေးဖတ်​ရ​တော့ဝူးထက်​ထားတာ
AuroraTingle Apr 29, 2016
Baekhsu Apr 29, 2016
4.4K 1.9K 489
70.3K 9.4K 870
Touji isawriter who worte  thriller but he dosen't believe ghost! One day he receive the latter form his granpa , and than the mistery begin~
This story is my own story ! Please enjoy^ ^ ~
Through The Eternal [BL Fanfic]
5K 543 96
ထာဝရဆိုတာ အနှစ်​တစ်​​သောင်းလား? အနှစ်​တစ်​သိန်းလား? ဘယ်​​တော့မှမကုန်​ဆုံးနိုင်​တဲ့​နေ့ရက်​​တွေဆိုတာတကယ်​ရှိနိုင်​ပါ့မလား?
Author - invisible_clover
Type - Fanfiction of SanSheng, Side characters,BL
Start - 6.3.18
151K 13.4K 155
A love story betweenahuman sacrifice ​andafox spirit!
This is my own story~
1.2K 383 65
Own creation Fanfic of Chinese cosplayers Baozi and Hana !
Please enjoy mina san !!
Before The Last Leaf : Falling
36.6K 3.7K 444
Type - Novel,BL,adult
'' Own Creation ''
Start date -22,11,16
ဖင်မနိုင်ပဲ ပဲကြီဟင်း စားချင်ပြန်ပြီ 😑
ဒီစာအုပ်က chinese bl novel ပါပဲ
bl series ကြည့်တဲ့သူများ သိပါတယ်
ရုပ်ရှင်ရဲ့ နာမည်ကတော့ counterattack ပါ 😍
ကျွန်တော်ကတော့ စာအုပ်ကို ပိုကြိုက်တယ် 😂
စာရေးဆရာနာမည်တော့ မသိဘူး 😁
Are You Addicted ကိုရေးတဲ့ စာရေးဆရာမပါပဲ 😚
ကိုယ့်ကို Lgbt ထဲ ဆွဲခေါ်တာ သူပေါ့ 😒
ဒီဝတ္ထုက စာဖတ်သူတွေ ငြင်းခုန်ကြတဲ့ ဝတ္ထုလေးပါ 😅
သူ့ပုံစံက abusive ဆိုပေမယ့် တစ်ချို့နေရာမှာ hidden joke လေးတွေ ပါပါတယ် 😮
ဖတ်ရင်းနဲ့ ဘာကြောင့် ငြင်းရတယ်ဆိုတာ သိလာမှာပါ 😁
adult ဆိုပေမယ့် အပိုင်းတစ်ရာကျော်မှ ပါတာ 😉
သူက ကျွန်တော့်ရဲ့ boy and boy love အပေါ် အမြင်ကို ပြောင်းစေခဲ့ပါတယ် 😊
အဓိက ဇာတ်ဆောင်နှစ်ယောက်လုံးဟာ ယောက်ျား ရင့်မာတွေ ဖြစ်ပြီး သူတို့နှစ်ယောက် အချစ်ဟာ ကဗျာမဆန်သလို နူးညံခြင်းလဲ မရှိပါဘူး
ဒါပေမယ့် နှစ်ယောက်လုံး အရမ်းချစ်ဖို့ကောင့်းပဲ
ကျွန်တော် ငြိုးသူကလဲ့စားကိုလည်း update မှန်
3.2K 629 43
ဒဏ္ဏာရီဆန်​လှ​သော ဓားတစ်​လက်​၏​နောက်​​ကြောင်း ~~~
5.5K 642 57
"သင်အင်" ဆိုတဲ့ သခင်အုပ်စုနှင့် "ကျုံး" ဆိုတဲ့ ကျွန်အုပ်စု တဖက်က ပြည့်စုံ ချမ်းသာခြင်းနှင့် သာယာခြင်း တဖက်က သောကပေါင်းများစွာနဲ့ အရာရာ မနည်းရုန်းကန်ရတဲ့ဘဝ ဒီ ဆန့်ကျင်ဘက် နှစ်အုပ်စုကြားမှာမွေးဖွားလာတဲ့ ကပြား တယောက် နဲ့ ဘယ်လို ရုန်းကန်ရမလဲ ဆိုတာ...
ကြိုပြောပါ့မယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းက bl မဟုတ်ပါ TmT. Reading list မှာ ခဏခဏ မှားထည့်ကြလွန်းလို့ပါ။ စောစောတော့မပြောမလို့ပဲ။ ထပ်ပြောပါ့မယ်။ bl မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါ translation မဟုတ်ပါ chinese လည်း မဟုတ်ပါ။ ကိုယ်ပိုင် ရေးထားတဲ့ ဟာလေးပါ။ တကယ်ပါ ဇာတ်လမ်းကို အဆုံးသတ်ကျ သေချာ ပြန်ရှင်းပြပါမယ် ဆိုပေမယ့် reader ကြားဖူးလောက်သလို သူများ stories တွေကို တော့ မှီငြမ်းထားပေမယ့် သူများရဲ့ complete whole stories ကို ကူးချထားတာမျိုးလည်း မဟုတ်သလို၊(စိတ် မရှိပါနဲ့ wattpad mailbox facebook ကဟာလေး တွေ့ပြီး လန့်နေလို့ပါ) ကိုယ်ဒီဟာလေး original one ပါ။ ဗမာစရိုက်လေးနဲ့ character တွေကို ရေ